Sonke Sinqabile | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 26, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokukhawuleza ndabona ukuba kukho kuphela iikopi ezinqunyelweyo ze Sonke Sinqabile iyathengiswa, bendisazi ukuba kufuneka ndi-odele ikopi yayo. Le yincwadi kaSeth Godin yamva kwaye yimanifesto encinci entle.
Ukusuka kumkhono wangaphakathi: Ingxoxo ka-Godin kukuba ukhetho lokusityhala sonke kwindawo eqhelekileyo ukunceda ukuthengisa i-junk engakumbi ebantwini alusebenzi kwaye alulunganga. Ithuba lexesha lethu kukuxhasa izinto ezingaqhelekanga, ukuthengisa kubantu abangaqhelekanga kwaye, ukuba unqwenela, ube yinto engaqhelekanga.
Umxholo uhamba nomxholo obonisa oko kuchazwa nguSeth Godin. Ukudityaniswa kwehlabathi, ukuhanjiswa okungabizi kakhulu, kunye nonxibelelwano olwandisiweyo lusenze ukuba sonke sikwazi ukuba semagqabini njengoko thina ngokoqobo are. Akunyanzelekanga ukuba sibe ngabantu abaqhelekileyo- sinokufumana abantu abanomdla, izinto esizithandayo kunye nezinto esizithandayo njengathi kuzo zonke iimbombo zehlabathi.
Njengoko isebenza kwintengiso yanamhlanje, umyalezo wencwadi ubalulekile kwimbono yam. Baninzi kakhulu ngaphandle abasebenzisa imidiya yoluntu njenge elinye nje ijelo. Ingxelo endiyiva ngalo lonke ixesha kwaye ayilunganga kwaphela. Kuphela elinye nje ijelo xa unqwenela ukuchitha ixesha lakho uzama ukuthengisa ngendlela enye. Ukujolisa phandle ayililo iqhinga elifanelekileyo ngemidiya yoluntu.
Iinkampani zinezixhobo kunye nethuba lokubonelela uyinqaba ndinendawo yokuqokelela, ukwabelana, nokunxibelelana. IChar-Broil's Uluntu lwasekuhlaleni alukho malunga nokuthengisa iigrill, malunga nokudibanisa uluntu lwabantu abanomdla wokugcoba phantse benkolo. Nje ukuba olo luntu luphumelele, bayaluxabisa uphawu oluye lwabanika ithuba kwaye, ekugqibeleni, intengiso iya kulandela.
Indawo apho inkampani yakho iphuhla khona ukuze ingumnqa ekuyiququzeleleni akufuneki nokuba ichaphazele imveliso okanye inkonzo. Ezinye iinkampani zenza umsebenzi omangalisayo wokukhuthaza iindibano zoluntu ezijikeleze uluntu, isisa, isiganeko okanye enye injongo eqhelekileyo.
Iarhente yethu iphinda ityale kakhulu kule bhlog, uthotho lwevidiyo, inkqubo yethu kanomathotholo, kunye nokuxhasa imicimbi yengingqi kunye neyelizwe ejolise kuyo abantu abangaqhelekanga njengathi othanda ukusebenzisa iteknoloji yentengiso. Siyamangalisa… sikhetha ukuthetha ikhowudi, ii-API, ii-aplikeshini ze-beta, kubahlalutyi kunye nokuzenzekelayo kunezinye izihloko zokuthengisa. Asithethi kakhulu ngeendaba zikaFacebook, zikaGoogle + okanye zikaTwitter… ezo zihloko zezi eqhelekileyo kwaye ungafumana iiblogi ezilikhulu ezilwela loo traffic!
Siza kunamathela kwizinto ezingaqhelekanga.
Enjani yona ukuba nkulu incwadi. Ndiyazithanda iincwadi ezicacisa into esiyenzayo kwaye zityhale ukuba sisebenze nzima kuyo. Njengoko uSeth esitsho, Injongo kukufumana kunye nokuququzelela nokujongana nokukhokela isizwe sabantu, sibamkele ubungqindilili babo, hayi ukulwa nabo. Ndiyathemba ukuba siyaqhubeka nokwenza loo nto!
Ukuqhubeka nokukhuthaza le ncoko, nceda ujoyine iphepha lethu lokuhlangana kwaye ubhalise kwincwadana yethu (ngasentla). Awudingi ukuba uvela e-Indianapolis nangona iminyhadala yengingqi yonke ithunyelwe apho. Siza kuqala ukuba nee-webinars ezithile kunye neziganeko ezibonakalayo kungekudala- mhlawumbi eyokuqala, njenge Iprojekthi yeDomino izicelo, kukuba wabelane kwaye uxoxe ngale ncwadi!
Izifundo ezi-7 ezifundiweyo ekuKhuthazeni ukuBhala kwakho
Iikona zeCSS3, iiGradients, iZithunzi kunye nokunye…
Kuvakala kakhulu kum njengezinto uDan Kennedy ebethetha ngazo kwiividiyo zakhe zamva nje. Ndiqinisekile ukuba uninzi lwamashishini / abanini bamashishini bayekile ukuzama ukufana nabanye abantu kwaye bajolise kwiimpawu zabo ezizodwa ekwabelaneni ngebali labo kunye nembono yabo, baya kuthi babone uphawu lwabo lokwenyani luvela ngokuzenzekelayo nangokwasemzimbeni. Le ncwadi kunye noDan kubonakala ngathi bayakuqinisekisa oku. Ndifuna ukuthatha ikopi yencwadi kaSete!
Scott, kuya kufuneka ndikhangele uDan Kennedy emva koko! Ndingathanda ukubona ezinye iinkcukacha zobunzulu kunye nencoko ngesihloko.